बेलायतसँग ऐतिहासिक श्रम सम्झौता हुँदै, श्रमिकले शुल्क बुझाउनु नपर्ने
माघ १, २०७८
यी ३ राशिका पुरुष हुन्छन् सबैभन्दा राम्रा श्रीमान, श्रीमतीलाई गर्छन् औधि माया
यी चार बानी, जसका कारण हुन्छ सिधै मृगौलामा पत्थरी
प्रहरीको आधुनिकीकरण र सुधार परियोजना सम्पन्न, केके भए उपलब्धि ?
पुस १८, २०७८
चालु पुँजी कर्जामा कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंक
पुस १२, २०७८
निर्वाचनको लागि म्यादि प्रहरीमा भर्ना खुल्दै
नवाब सैफ अली खानको भव्य महलः यसकै लोभमा करिना बनिन् दोस्रो श्रीमती
पुस २५, २०७७
एजेन्सी – सोशल मिडियामा निकै मँहगो पटौदी प्यालेसका धेरै तस्वीरहरू भाइरल छन्। बलिउड अभिनेता सैफ अलि खानको त्यो महल देख्दा सबै छक्क पर्छन्।
यस्तो अवस्थामा उनका फ्यानहरुले प्रश्न गरेका छन् की सैफ, करीना र उनका छोरा तैमूरलाई यो दरबारमा बसाई सार्नेछन् ?
बलिउडका नवाब सैफ अली खान आफ्नो भव्य जीवनशैलीका लागि परिचित छन्। अभिनेताको आफ्नै नवाबी शैली छ जसमा सबै प्रशंसकहरू फिदा हुन्छन् । भर्खरै, सैफले आफ्नो परिवारको साथ पटौदी दरबारमा केही समय बिताए। उहाँ त्यहाँ केही दिन बसे र धेरै रमाईलो गरे।
तर सोशल मिडियामा पटौदी प्यालेसका धेरै फोटोहरू भाइरल छन्। सो महलमा उनीहरुको जिवनशैली निकै रोमाञ्चक हुनेछ । तिनीहरू पौडी खेल्न, खाना पकाउन, पुस्तकहरू पढ्न, परिवारको नजिक रहन पाउनेछन् । यस्तो अवस्थामा जीवन उत्तम हुन्छ। उनले अझै सो दरवारको नजिकै राम्रो स्कूलहरूको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
यो महल आफ्नो बनाउन सैफलाई धेरै मेहनत गर्नु परेको थियो । उनले हालै ८०० करोड मुल्य चुकाएर मात्र आफ्नो बनाएका छन् । आफ्नै महल भएपनि केही कागजात नमिलेका कारण उनले समस्या भोगेका थिए ।
१० एकडमा फैलिएको यस दरबारको १५० कोठा छ। यस बाहेक, त्यहाँ सात बेडरूम, ड्रेसिंग कोठा र बिलियर्ड कोठा छन्। सोशल मीडियामा यस विलासी महलका धेरै चित्रहरू छन्। करीनाले त्यो दरबारको तैमूरका केहि तस्वीर पनि सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
कुनै पनि प्रतिक्रिया पाईएन !
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् Cancel Reply
फेसबुकमा प्रतिक्रिया दिनुहोस
बखत बिष्ट भाइरल ट्याक्सि चालक नुमालाई यसरी फकाउदै हेरौ रमाइलो कुराकानी (भिडियो
लगातार २ दिन घटेको सुनको भाउ आज ह्वात्तै बढ्यो, कति ?
आज बिहान गाडीको ठ’क्क’रबाट मर्निङ वाक हिँडेकी कमलाको मृत्यु, एकैचोटी दिएको थियो चार जनालाई ठ’क्क’र
अस्ट्रेलियामा नेपालीले पतिको ज्यान लिएर शारीरिक सम्पर्क राख्न नसकेको बयानले जेल छोटियो
फिल्म कबिर सिंहमा घरेलु कामदारको भूमिका निभाएकी पुष्षाको फोटोसुटले हंगामा
धुर्मुसले रङ्गशाला चन्दा मगेर बनाउन सक्दैन भनेर बिरोध गर्दा तारा बराललाई कस्ले दियो यस्तो धम्की ? खुल्यो यस्तो रहस्य (भिडियो सहित)
दुहबीमा घट्यो डरलाग्दो घटना, खुल्यो यस्तो रहस्य (भिडियोसहित)
दिपक र सरुले रुदैं गरे छुट्टिने निर्णय, तर सरुले भनिन् म छाड्न सक्दिन (भिडियो)
विनोदको खुसी फर्कियो, अनिता बिस्तारै हिड्न र बस्न सक्ने भइन ,यस्तो छ पछिल्लो अबस्था (भिडियो हेर्नुस्)
१३० किलोकी सानुमायाकाे डान्स टिकटकमा भाइरल, जिउ मोटो भएपनी डान्स खत्रै गर्छिन( हे’र्नुस् भिडियो)
यस्तो रहेछ धिरेन शाक्य र राजेश हमालबीच दु स्म नी हुनुको कारण, धिरेनले खोले मुख : राजेन्द्र खड्की भन्छन्, राजेशको दोश छ’ (भिडियो हेर्नुस्)
मन्दिरको ढोकामा बसेको कुकुरले दर्शनगर्न आउनेलाई आशिर्वाद दिन्छ, सबैसंग हात मिलाउँछ (भिडियो हेर्नुस्)
© 2022: Nayabook
Website by: Prathana